?Sifo shirciya maahan kala-diridii baarlamaanka Galmudug, madaxwayne Caalinna arrintaasi waa uu ku dagdagay? Guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug ?Hayle? – Radio Daljir
?Sifo shirciya maahan kala-diridii baarlamaanka Galmudug, madaxwayne Caalinna arrintaasi waa uu ku dagdagay? Guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug ?Hayle?
Gaalkacyo, Dec, 20 ? Guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug mudane Xassan Maxamuud ?Hayle? ayaa si cad maantay u qaadacay wareegto shalay uu kukala diray madaxweynaha maamulkaasi Galmudug Maxamed Axmed Caalin.
Afhayeenka baarlamaanka maamulka Galmudug ?Hayl? oo waraysi siiyey Radio Daljir ayaa sheegay in sifo aan sharci ahayn loo maray qaabka uu madaxweyne Caalinu u kala diray golaha baarlamaanka Galmudug.
Xasan Maxamuud ?Hayl? guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug waxaa uu sheegay in madaxweynuhu uusan kala diri karin baarlamaanka ilaa ay galaan denbiyo sharciga ka dhan ah sida uu tilmaamay, waxaana uu tusaale u soo qaatay in baarlamaanka lakala diro karo haddii ay fadhiisan waayaan laba kal fadhi oo isxiga.
Dhinaca kale, Afhayeenka baarlamaanka Galmudug wuxuu sheegay inay ka qayb gelayaan shirka wada tashaga Soomaalida ee looga arrinsanaayo Dastuurka, kaasi oo 21-ka bishaan December ka furmaya magaalada Garowe ee xarunta dawladda Puntland.
Xaalad siyaasadeed oo cakiran ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ka taagnaa maamulka Galmudug, waxaana xilligaan aan jirin cid rasmi ah oo lagu tilmaami karo inay matali-karto maamulkaasi, iyadoo dhibaatooyinka ka taagan Galmudug ay u muuqato mid baabi?inaysa aqoon-sigii beesha caalamka ee maamulkaasi.